Zvepasi rose SEO Zvakanakisa Maitiro
Kugadzirisa Zvemukati Zvako Kunze
Muvhuro, Ndira 24, 2011 NeChishanu, Kurume 1, 2013 Douglas Karr
Unogona kusanetseka kana vateereri vako vari vepasi rose panguva ino, asi chingave chinhu chaungade kunyatso tarisa. Kukura kwepasi rese pawebhu kuri kukwirisa uye kunogona kuva chinhu chinonakidza chekambani yako kuwedzera bhizinesi rayo. Vatatu vevatengi vedu vari kushambadzira pasi rese uye tanga tichishanda kutsvaga injini yekutsvaga maitiro akanakisa. Heano zvimwe zvakawanikwa:
gShiftLabs chishandiso chekutarisa SEO mudzimba nekune dzimwe nyika.
Mumamiriro ezvinhu akakodzera, kuti uwane chinhanho mune yakasarudzika nyika iwe unofanirwa kuve neanoratidza ccTLDs nenyika (.co.uk, .fr, .de, nezvimwewo) zvinochengetwa munyika yemuno. Kana icho chisiri chisarudzo, shandisa subdomains pamutauro wega wega, senge se.domain.com, de.domain.com nezvimwe.
Gadzira akawandisa Webmaster Zvishandiso maakaundi eiyo yega ccTLD kana subdomain.
Ive neshuwa kuratidza mutauro uri muchikamu.
Kukwezva zvinongedzo kubva kune iyo chaiyo nyika.
Zano reGoogle pa kubata mukati memunyika. Yekunze DNS inogona kubatsira kana iwe usingakwanise kuitisa pasirese.
Kana iwe uine hofisi yekune dzimwe nyika, ita shuwa yekusimbisa iro hofisi pane ino saiti inoshanda.
Usavimbe neshanduro inoshandisika. Kana iwe uchinyatsoshuvira kusvika kune vateereri vepasirese, renda manzwi epasi rese kuti ududzire zvirimo.
Tags: Content Marketingpasi rosekutsvaga kwenyikayepasi rose seoSearch Engine Optimization
Bob Prosen Anotangisa Madiki Bhizinesi Accelerator